Boky sy Trakta - Lalamasaka Hatry ny Ela
par Jane Collins Daoud · Published 26 septembre 2019 · Last modified 3 décembre 2019
« Ary izao no hiseho amin’ny andro hanaovan’i Jehovah ny fanatitra, dia hovaliako ny lehibe sy ny zanaky ny mpanjaka mbamin’izay rehetra mitafy fitafiana hafa ».Zefania. 1 : 8. Efa nandinika lalina Andriamanitra ka manan-kolazaina tokoa ny amin’ny zavatra inian’ny ankabiazan’ny olona tsy jerena, izay mihevitra fa tsy miraharaha ny fomba fiankanjony Andriamanitra sady manala tsiny ny tenany amin’izany izy ireo ka...
“Midira amin’ny vavahady èty ianareo, fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana mankany amin’ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa èty ny vavahady, ary tery ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy” (Mat. 7 : 13-14) Lalana roa Iza amin’ireo no hofidianao? Teraka tamin’ny ota ny olona rehetra, sady manana toetra tia ota satria taranak’i...
Ny Baiboly no fitambaran’ny tenifikasana sy ny didy… Mampiseho ny fomba hiaraha-mandeha amin’Andriamanitra ny didy, ary manambara amintsika ny fitahiana izay atolotr’Andriamanitra kosa ny tenifikasana. Ny hahavoavonjy anao aloha no zavatra mahaliana anay voalohany indrindra, ary rehefa izany dia tonga « zanaky ny tenifikasana ianao », zanak’Andriamanitra. Hoy ny Baiboly : Ny tenifikasan’Andriamanitra dia Eny sy Amena ho an’izay rehetra ao amin’i Kristy Jesosy. Na iza na...
par MA Daoud · Published 26 septembre 2019 · Last modified 28 mars 2020
« Koa miomana kosa ianareo fa amin’ny ora tsy hampoizinareo no hiavian’ny Zanak’olona. »Matio. 24 : 44 RAHA FANTATRA FA HO AVY ANIO ALINA JESOSY ! Poa toy izay dia ho feno olona mivavaka ny fiangonana ; Ho foana ny trano fijerena sary mihetsika (sinema), ny toeram-pisotroana zava-mahamamo, ny toeram-pandihizana sy ny toeram-pilalaovana ary ny toeran-kafa tsy araka an’Andriamanitra ; Tsy hisy...
Ny famonjena Ny famonjena no foto-kevitra lehibe indrindra ao amin’ny tantaran’ny Filazantsara, ary izy no hafatra lehibe indrindra nampitondraina ho an’ny olona. Taon-jato maro talohan’ny nahatongavan’ny Mesia no efa naminanian’i Isaia ny hiaviany ka nanaovany hoe: “Izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo” (Isa.35:4). Raha nanambara ny hahaterahany ny anjelin’Andriamanitra dia nilaza ny momba an’i Maria tamin’i Josefa hoe:...
Aoka halemy fanahy amin’ny namanareo ianareo
Na izany aza, manana ny fahasoavan’andrimanitra izay mahatonga ny olona hiasa amin’ny fahatsaram-panahy eo anatrehan’ny zava-tsarotra mitranga rehetra. Amin’ny alalan’ny fahamoram-panahy vokatry ny fahasoavana no tena hisehoan’ny fiainam-panahy marina. Ny fitiavana, ny fahatsaram-panahy, ny famelan-keloka no hanehoana ny fitenin’ny lanitra. Hoy kristy: “izao no ahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia”. Jao.13:35. Katsaho ao amin’andriamanitra ny fahasoavana fahalemem-panahy. Raha...
par Adolphe ANDRIAMANGA · Published 19 septembre 2019 · Last modified 3 décembre 2019
Fiteny mahazatra ny olona ny hoe : « TSY MANINONA IZAY INOANA, REHEFA TSOTRA ». Deraintsika ny olona TSOTRA, kanefa tsy ampy ny fahatsorana. Mety misy OLONA TSOTRA amin’izay inoany ary manao zavatra marina. Omentsika haja lehibe ny olona izay tsotra ka mafana fo amin’izay zavatra itompoany ary vonona éry ny ho faty amin’izany. NEFA tsy ampy ny FAHATSORANA fotsiny. – Nino TAMIM-PAHATSORANA ity vehivavy iray fa daozim-panafody sahaza no nalainy...